Ny Nubia Red Magic 3 dia miverina amin'i Master Lu mahery kokoa noho ny taloha | Androidsis
Ny Nubia Red Magic 3 dia miverina amin'i Master Lu matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay
Miresaka momba ny Nubia Red Magic 3, ny tobim-piantsonana manaraka an'ny orinasa Aziatika an'ny ZTE.
Hiseho amin'ny Alahady 28 aprily ny fitaovana, ary alohan'ny handefasana azy ofisialy dia fantatsika fa hampiditra endri-javatra mahafinaritra toy ny fampisehoana miaraka amin'ny tahan'ny hafanana 90 Hz. Alohan'ny hanombohana, ny fitaovana dia efa nodinihin'i Master Lu, ary ny vokatr'izany dia manamarina antsipiriany lehibe sasany. Fantaro eto ambany!
Ny Red Magic 3 dia niseho tamin'ny mari-pahaizana sinoa miaraka amin'ny isa maodely 'NX629J'. Ao amin'ny tabilao angona dia toa ampiasain'ny processeur Snapcagon 855 an'ny Qualcomm voahodidin'ny 2.84 GHz. Azontsika atao ihany koa ny manamarika fa nosedraina tamina RAM 12 GB ambanin'ny hood izy io, noho izany ny tatitra teo aloha izay nilaza fa ho tonga miaraka amin'ny fahaizan'ny RAM dia voamarina. Ny tsaho hafa koa milaza fa mbola hisy variant RAM 8GB hafa.
Nubia Red Magic 3 nomen'ny Master Lu
Tamin'ny fitsapana dia nahavita nahatratra isa CPU 174,283 ny isa ary isa 191,043 isa ny GPU. Ny isa fahatsiarovana azy dia 58,699 isa ary ny isa fitahirizana dia 48,922 isa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 836 MB / s ary ny hafainganan'ny fanoratana 257 M / s.
Ny tanjona mavitrika Red Magic 3 dia 472,947, mialoha mialoha ny Xiaomi Black Shark 2, izay manana isa totalin'ny 404,809 isa, ary ny Miaina iQOO aho, izay manana naoty 384,718.
Ny Nubia Red Magic 3 dia miseho amin'ny fifaninanana lalao
Teo aloha, ny finday dia nahazo isa 406,129. Mazava fa dia nanana fivoarana teo amin'ny sehatry ny fampisehoana manao ahoana ny fahaizany mampanantena antsika zavatra lehibe avy aminy.
Farany, voalaza fa ny Nubia Red Magic 3 dia hanana fakantsary aoriana iray, scanner vita amin'ny dian-tànana any aoriana ary a Batterie mahazaka 5,000 mAh miaraka amina tohana famahanana haingana. Hanana koa a mpankafy fampangatsiahana anaty, izay ho rafitra mangatsiaka hisorohana ny hafanana be loatra rehefa milalao lalao mitaky be loatra sy manao asa be fangatahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Nubia Red Magic 3 dia miverina amin'i Master Lu matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay
Fanaraha-maso headphones Energy Style Style 6